Ukukhula kweHormone eBangkok. Ukusetshenziswa kwe-hormone yokukhula eThailand
ngu-HGH Thailand November 29, 2017
Namuhla ngingathanda ukukhuluma ngesidakamizwa esinabantu abaningi
ikhethini lokufihla. Lesi sidakamizwa esimangaliso sibizwa ngokuthi - i-hormone yokukhula.
Ihomoni yokukhula (hormone yokukhula, STH, HGH, somatotropin, somatropin)
i-hormone ye-peptide ye-lobe yangaphakathi ye-pituitary gland, esetshenzisiwe
ezemidlalo ukuze kutholakale ukukhululeka kwemisipha. Kwabekwa kuqala
ku-1956. Uthole igama le-hormone yokukhula noma i-somatotropin (kusuka kwisiLatini
i-catfish - umzimba) ngoba kubantu abasha kubangela ukusheshisa
ukukhula okulingana, ikakhulukazi ngenxa yokukhula kwamathambo ama-tubular eside
I-hormone yokukhula ikhishwa ku-gland pituitary ngokuphendula i-
izimpawu ze-hypothalamus. Cishe ngemva kweminyaka engamashumi amabili, a
umuntu unciphisa ukukhiqizwa kwaleli hormone ngomzimba. Ukuguga kwe
umzimba uhlotshaniswa nezinga lokukhululwa kwe-hormone ukukhululwa. Khona-ke
yonke iminyaka engu-10 izinga lokukhiqizwa kwe-hormone yokukhula liwela ngo-15%.
I-hormone yokukhula ayinayo ukuhlukana kobulili. Izinga lakhe lifanayo
amadoda nabesifazane. Naphezu kokuthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa equkethe
i-hormone yokukhula ayivunyelwe yi-WADO (World Anti-Doping Organization),
eThailand, lezi zidakamizwa zitholakala ngokukhululekile.
Izinzuzo ze-hormone yokukhula iyinhle - ayikho okuningi
ukudla kwezemidlalo, i-peptides, noma ngisho ne-anabolic steroids. Kukholelwa
ukuthi i-hormone yokukhula inomthelela omuhle ememori, ibuyisela emuva
ukuguga nokwenza isikhumba sibe mncane.
Futhi, izinzuzo zayo eziyinhloko yilezi: ukuncishiswa kwamafutha omzimba ngokweqile, ukwanda
in mass muscle, ukunciphisa inani imibimbi nokuvimbela for
imibimbi yesikhathi esizayo, ukwanda kwamathambo we-skeleton kanye
ukuqinisa amasosha omzimba.
Kuthuthuka ukuthi uDemi Moore odumile, uRobbie Williams noMadonna
asetshenziselwa ama-hormone, futhi uStallone waze wabhekana nokungekho emthethweni
ukuhamba kwe-hormone enkulu yokukhula ngomngcele wase-Australia,
belethwe ngokusemthethweni eThailand.
Odokotela abaqinisekisiwe abaqhuba imijovo ye-hormone yokukhula bakholelwa lokho
ingozi kubalandeli bakhe yinto eyodwa kuphela - ukugijima ibe yinkohliso. Okufanayo
ukwelashwa kushibhile, futhi ngokuthenga i-hormone kuyi-intanethi, kukhona
ingozi yokuthola into engeke iqondwe ngaso sonke isikhathi
Nakuba kukhona omunye umbono ngabacwaningi abaphakamisa lokho
izakhiwo zokuvuselela zalesi sidakamizwa zixoshwa kakhulu. Futhi
ukuthi i-hormone yokukhula ingalimaza ngisho nomzimba.
Kwezinye izibuyekezo, i-HGH idalwe ngemiphumela emibi, okuyinto elula
ayikwazi ukuvusa. Isibonelo, ukwanda kwesisu akusona isayensi
isiqinisekiso. Lokhu kungenzeka kunombono kuphela uma kuhlanganiswa i-HGH
i-steroids futhi idla ukudla okuningi kakhulu
Futhi, i-hormone yokukhula ayithinti izinga le-testosterone, i-libido
kanye nomsebenzi wezocansi, ngokungafani ne-steroids. I-hormone yokukhula yamadoda impela
ephephile ngokwesigaba esiseduze. E-Thailand, kukholelwa futhi
ukuthi i-HGH ibangela izicubu, kodwa lokhu sekuye kwachasisa isifundo. Ingakwazi
kuphela ukuvusa ukuthuthukiswa okusheshayo kwezicubu ezikhona kakade (ngaphambi
ukuqala kwe-hormone yokukhula kuyadingeka ukudlula ukuhlola
ngaphandle kokuthuthukiswa kwezinqubo ezinjalo).
Ukuthuthukiswa kwemiphumela emibi kakhulu uma usebenzisa okunconywayo
Izilinganiso ezivunyelwe zokukhula kwe-hormone akunakwenzeka. Yebo, ngendlela
mayelana nemiphumela emibi emincane, singasho ukuthi zisuswe kalula,
ikakhulukazi ngaphandle kwemithi eyengeziwe.
Ukulandela lokhu ngokujwayelekile, kungathiwa ukuthi i-hormone yokukhula
umuthi ophephile. Ngokusho komzimba we-Thailand, i-88% yalabo
ukuthatha i-HGH kubheka ukuthi kuyisidakamizwa esisebenzayo. Futhi, i-86% iphawule ngempela
amafutha aphawulekayo okuvuthayo kanye nenzuzo kumisipha yomzimba. Ukwanda ku
Izinkomba zamandla zaphawulwa yi-79%. Ngesikhathi esifanayo, ngaphezulu kuka-80%
abaphendulayo kalula babekezelela ukujova kwe-hormone yokukhula. Eceleni
Imiphumela yabonakala kuphela yi-23% yabathile abazama ukulinganisa
amanani we-hormone. Ngokuyinhloko, isithiyo esikhulu sokufika kubo
akuyona ingozi, kodwa intengo ephakeme futhi ejabulisayo ye-hormone yokukhula.
Wonke umuntu ozimisele ukuqala ukuthatha i-hormone yokukhula kufanele athathe
unakekele kuphela isikhundla esanele sezimali (emva kwakho konke, i-hormone
isenzo ngokusetshenziswa kwesinye isikhathi noma ukusebenzisa emasethweni aphansi sinamandla ngokwanele), kodwa
futhi mayelana nemikhiqizo yekhwalithi etholakele.
Thenga iHGH ngokomthetho eSingapore - ukulethwa kwelanga le-4